Ezweni lethu, kunemiqondo eminingi ekuboneni kokuqala incazelo elula. Ngesikhathi esifanayo, zisetshenziswe ezindaweni ezahlukene kakhulu zomsebenzi. Kuye ngomongo esisebenzisayo, futhi uchaze incazelo yawo. Enye yegama eliyinkimbinkimbi futhi elinamakhono amaningi "ubuqotho." Leli gama livame ukutholakala ekuphileni kwansuku zonke, kodwa bambalwa abangayinika incazelo ecacile. Ake sizame ukubhekana nalomsebenzi onzima manje.
Ukwelashwa okufushane okujwayelekile
Ngakho-ke, ngokusho kwesichazamazwi esichazayo, ubuqotho buyinto evamile yezinto noma izinto ezinesakhiwo sangaphakathi esiyinkimbinkimbi. Lo mqondo uwukubonakaliswa kokuzimela, ukuzineliseka, kanye nokuhlanganiswa kwezinto ezithile. Ngaphezu kwalokho, kungashiwo ukuthi ubuqotho bungumlingiswa wekhwalithi, okuhlukile, ukuqala, okwakhiwa endaweni ethile futhi kuhambisana nendaba ethile. Ngamanye amazwi, leli gama libonisa inhlanganisela yenani elithile lezingxenye kwenye into ethuthukisa futhi isebenze ndawonye, ngaleyo ndlela yakha uhlelo oluvaliwe oluphelele. Uhlelo olunjalo lungaba yinoma iyiphi i-biological unit (kokubili iseli nomuntu), isimo noma umphakathi omncane, isofthiwe, njll.
Ngokusobala, igama elithi "ubuqotho" livela "lonke" noma "elilodwa". Ngokuvamile siyisebenzisa ukuze kuvezwe okuthile okuhlukile, okwakhiwe ngokugcwele futhi seyenele ngokwanele. Isibonelo esinikezwe ngenhla yiseli njengeyunithi yezinto eziphilayo. Ihlanganiswe i-membrane ekhethekile lapho i- intercellular ingakwazi ukungena khona, futhi ngaphakathi kwayo yizo zonke izingxenye ezihlinzeka ngokuyisidakamizwa okudingekayo ngaphakathi kwalesi simiso. Kulawa maseli kukhona konke okuphilayo - abantu, izilwane, izitshalo. Amaseli ayingxenye yensikimba ngayinye yangaphakathi, enquma ubuqotho bawo. Sonke, sithola impilo ephilayo ephelele, umsebenzi wayo ohlanganisiwe futhi oncike kwabanye abafana nawo. Kodwa kuxhomeke emvelweni - umoya, amanzi, ukukhanya. Lezi zakhi, ezihlanganisa ama-molecule, nazo zanele ngokwabo futhi zizodwa, kodwa zihlangene nabantu, izilwane nazo zonke ezinye izakhamuzi zeplanethi yethu, zakha i-biomass. Futhi, i-biomass nayo isakhiwo esisodwa, lapho zonke izinto eziphilayo zisebenza kahle.
Esikhathini sosayensi esiqondile, sesivele sicabange ukuthi ubuqotho buyini. Manje ake sibheke ezenzakalweni zengqondo kanye nemigomo ayisebenzisa kaningi. Enye yalezi "isimiso sobuqotho bomuntu". Ubuntu bomuntu ngumqondo ongokomoya. Awukwazi ukuzwa, ukuxilongwa, noma uzizwe, njengokuthi, umuntu, noma amanzi. Kodwa ubuntu lwakhiwe ngesisekelo sezinto ezithinta futhi zithuthukise. Phakathi kwalabo esizobiza igama lokuhlangenwe nakho kokuphila, amaphutha, ukuhlupheka, injabulo, ubungane nokukhwabanisa, uthando, ukwakhiwa komndeni, ukukhula komsebenzi, okuthandayo kanye nokuthandayo, izintshisekelo nezinye izinto eziningi. Ukwakha umuntu kuyinkqubo yomuntu ngamunye. Emlandweni wesintu kukhona abantu abaye bazimela ngokwabo futhi bazimele bebancane kakhulu. Futhi ngezinye izikhathi kwenzeka ukuthi umuntu ovuthiwe oye wachitha isikhathi esingaphezu kwekhulu leminyaka emhlabeni akazange akwazi ukwenza ubuntu bakhe obungokomoya buphelele futhi banele.
Ososayensi bezombusazwe kanye nezazi-mlando bahlale bebhekene nomqondo onjengokuthembeka komhlaba. Isimo saso asifani nanoma yini echazwe ngenhla. Umehluko nje wukuthi kulokhu sikhuluma ngemingcele ethile yomhlaba yezwe elithile, ulimi lwayo lwesizwe, ifulege, iculo kanye nezinye izimfanelo. Ngaphambi komqondo wezombangazwe, isimiso sobuqotho bukahulumeni sakhiwe nemigomo kazwelonke. Ukuhlanganiswa kwezizwe, uma kukhona, kwakungabalulekile. Ngakho-ke, endaweni yase-Italy yesimanje yayihlala isiLatini, eFrance - amaCelts, eJalimane - amaGoths, nasemazweni ethu - okhokho bamaSlav. Namuhla, abantu abahlala kulokhu noma kuleso simo abaphazamisi ubuqotho bayo.
I-informatics nezobuchwepheshe zanamuhla
Ubuqotho bungumqondo osanda kusetshenziswa kabanzi emkhakheni wezobuchwepheshe besayensi, ekuhlelweni nasekuqhubeni imisebenzi ye-inthanethi. Ngokuyinhloko, sikhuluma ngokubaluleka nokungaguquguquki kwamakhodi wemithombo yamafayela namafayela. Isibonelo, thatha isayithi elivame kakhulu, lihlanganiswe ngumhleli wezinombolo zamakhodi omthombo. Ekhasini ngalinye ngabanye, izici ezithile, ukuhlanganiswa kwezimpawu, izinombolo kanye nezimpawu ezisetshenzisiwe. Bonke, bakha isithombe esiphelele, okwaba yisisekelo sensiza ye-Inthanethi. Uma ikhodi yomthombo isetshenzisiwe kabi, kukhona ukwephulwa komsebenzi wengane. Izilungiselelo zilahlekile, ngenxa yalokho, isithombe sonke sanyamalala. Kumele kuqaphele ngokwehlukana ukuthi kuleso simo kuyoba kufanelekile ukuhlola ubuqotho bolwazi. Ungakwenza lokhu ngokwenza iseti ethile yemisebenzi. Futhi, ukubuyisela idatha yangempela, ungenza umsebenzi ovulekile.
Ku-biology, kwengqondo, geography nezombusazwe, kwikhompyutha yesayensi nobuchwepheshe obuphezulu - yonke indawo kukhona ubuqotho. Kodwa kunoma yiliphi lalezi zimo lokhu kubumbana kungaphula. Ngokuqondene ne-biology, isibonelo esicacile sokuphula ubuqotho yizifo, ukuqedwa komsebenzi wezitho ezithile, ukuchithwa. Ezingqondweni, ukwephulwa kobuqotho buntu kuyinkinga ehlukene yengqondo. Lapha ungakhuluma nge-schizophrenia, amnesia, psychosis, neurasthenia nezinye izifo eziningi ezingqondweni. Ukuzama ensimini yombuso, ukubhujiswa kwezimpawu zawo ukuwa kwebunye bayo. Lesi simo sibonakala ngesikhathi sempi kanye nezingxabano zamazwe ezihlomile. Umbuzo wokuthi ubuqotho bemikhiqizo ye-intanethi bungaphula kanjani, sesivele sihlolisisile ngokuningiliziwe.
"Prospan": analogue kushibhile izingane enyakeni 1